Aweys: Dube Dalka Lagu Burburiyay Dheh! | KEYDMEDIA ONLINE
Aweys: Dube Dalka Lagu Burburiyay Dheh!
Keydmedia Online, Editorial - Xasan Daahir Aweys Asalkiisu wuxuu ahaa Korneel Ciidamada Asluubta, wallow Waqtiyadii dambe uu Shaati Diimeed gashaday, Dadka yaqaana waxey ku sheegaan in uu yahay Nin fudud oo aan tala qaadan taladiisana aysan kaafin.
Tala xumada iyo kaligi talisnimada ayaa Sida lagu tilmaamo "Wadaadka Waalan" waxa u horseeday in kooxdiisii maskax ahaan la burburiyo kadibna awood ahaan lala wareego.
Xasan Daahir Aweys wuxuu Madax ka ahaa Barlamaankii MMI, wuxuuna muddo dheer ku soo dhex jiray Dagaalada Sokeeye, isagoo lagu tilmaamo inuu yahay Hogaamiye Kooxeed-diimeed ee hubeysan, wuxuu Mas'uul ka ahaa inuu Dagaal diimeed fatwooyin ku geliyo Dhalinyaro aad u tiro badan oo Soomali ah kuwaasoo ku halaagsamay Dagaaladii ay ka wadeen Ururkii Al-Itxitaad dalka Soomaliya, kadibna wuxuu u xuubsiibtay Ururka Al-Ictisaam.
Wuxuu burburkii MMI-dii kadib u cararay Magaalada Asmara ee Dalka Iritereya, kadibna wuxuu ka qeybqaatay dhismadii Ururkii Xisbul Islam. Wuxuu Xoog ku masaafuriyay Walaalkiis Shiikh Axmed oo xiligaasi u sheegay in Dagaalada uu wado ay yihiin kuwo fidno ah, kuwo Baadil ah oo aan wax Shaqaa ku laheyn Jihaad, waayo ma jiro Islaam, Islaam kale ku Jihaada.
Xasan Daahir sida loo yaqaan "Wadaadka Waalan" ma qaadan Waanadaas Dhaxal ku oolka ah oo Aaqiradiisa iyo Aduunkaba wax u tari laheyd, ee Carro ayuu kasii qaaday. Waxaad wada Xasuusataan sidii loogu soo dhaweeyay Istaadiyo Muqdisho markuu ka yimid Asmara Bishii April 2009, oo Bulshada Muqdisho ku nool intii ka badbaaday Xasuuqii Cabdullahi Yusuf, Gabre-Itoobiya, ay kusoo dhaweeyeen Magaalada Muqdisho ayagoo lulaya Caleemo Qoyan. Ma uusan yeelan Garaadkii dareensiin lahaa Rabitaanka Bulshada usoo Banaanbaxday ee wuxuu bilaabay inuu Bulshadaa Degaankoodi ku rafto.
Ragg ka ag-dhawaa oo lagu tilmaamo inay yihiin Maskaxda Argagixisada hagta ayaa waxey yiraahdeen "Aabahayagiyoow, Shiikhayagiyoow, Ma Maantay baad Jihaadkii oo meel fiican maraya ka hareesaa?".
Taladaas waa uu qaatay ay kula taliyeen Raggaas oo kala ahaa: Suldaan Garyare oo Maantay Qaxooti ku ah Dalka Sweden oo maamula Safxadda Codka Al-Shabaab ee "Somalimemo", Cabdullahi Cali Xaashi, Cabdifitaax oo ah Qasnajiga Ururka Al-Shabaab, Shangole, Godane iyo Roobow.
Dhacdadaas kadib waa wada ogsoontihiin wixii ka dambeeyay oo uu Sababay "Wadaadka Waalan" iyo Kooxdiisa, sida Barakac 2 Malyan oo Qof, Burbur 6 Degmo oo Muqdisho, Dilal Qorsheysan lagu laayay 280 Nin door iyo siiba Xasuuqii Labeenta Soomaaliyeed (Hotel Shaamoow) halkaasoo ay ku nafwaayeen Muwaadiniin ay kamid yihiin Prof. Ibraahim Xasan Cadow, Dr. Axmed Cabdullahi Waayeel, Drs. Qamar Aadan Cali, Dr. Suleymaan Colaad, Dr. Shahiid iyo 60 kale oo wada Dr. Shahiid ah. Qaraxii Hotel Muna, Qaraxii Hotel Madina, Qaraxii lala beegsaday Bukaankii hor dhoobnaa Isbitaal Banaadir, Qaraxii lala beegsaday Ardadii Turkiga loo qaadi lahaa...
Waxaa kaloo xusid mudan in aan Xasuusano, Xerada Qaxootiga Aduunka ugu weyn ee Dhadhaab Dadka u Qaxay oo Maantay ku jira intooda badan waxaa soo Barakiciyay Jihaadka "Wadaadka Waalan". 160ka Kun oo Dhalinyarada ah oo Badda, Saxarada, Xabsiyada ku dhamaaday waxaa soo Barakiciyay Jihaadka "Wadaadka Walaan".
Soomaalida oo ah Ummad Aftahanimada uu Alle ku manneestay ayaa tiraahda “Nabsi Bil ha jiro, Barise ha jiro Isha Baarkeed ka dhaw” Habaarkii Dadkii la laayay, la Barakiciyay Maanta ayuu soo ifbaxay kadib markii Xasan Daahir uu Habeen meel ku hoyan waayay, Asagoo Naf Lacaari ahnah uu Maantay Magan u yahay kuwii uu Nafsiga ka galay.
Wadaadka Waxaa Raadkiisa ku daba jooga Mareykan iyo Yurub, Itoobiya iyo Kenya, Eritereya iyo Iiraan, Xawaalada Amal iyo Dahabshiil, Godane iyo Kooxdiisa. Wax badan ayuu ka ogyahay Kooxda Argagixisada ah oo asagu uu kamid ahaa, waana Tuubo muhim ah oo Macluumaad badan laga hoorsan karo (Laga ogaan karo). Sidaa daraadeed waa inuu ku jiraa Gacmo la Hubo oo lagu kalsoonaan karo.
Dunuubta Nuucaas ah Qofka gala, ma jirto Dowlad Cafin karta, Ma jiro Sharci Islaam iyo Mid Caalam oo siin kara "certificate" Dambi la'aan ah. Afka Qalaad Xasan Daahir oo kale waxaa lagu yiraahdaa "Terrorist" ama "Criminal" ama Argagixiye Dhiigyacab ah.
Aweys Wareysi uu siiyay Keydmedia Online muda hada dhawr Sano laga joogo waxa uu ku sheegay in Dagaalka uu yahay mid Dadka loogu Nasteexeynayo isla markaana iyaga ay u dowrbideen Shacabka Dagaal aan dhamaan isagoo tusaalayaal soo qaatay (Kor ka Daawo Wareysiga).